स्कुलबाट ४ बजे पछि घर फर्कनुपर्ने विद्यार्थी कहिल्यै नर्फकने गरि विदा भए ! खास कारण यस्तो छ (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > स्कुलबाट ४ बजे पछि घर फर्कनुपर्ने विद्यार्थी कहिल्यै नर्फकने गरि विदा भए ! खास कारण यस्तो छ (भिडियो)
पोखराको भद्रकाली माध्यामिक बिद्यालयमा बिद्यार्थीहरु बिच बिबाद भयो । हात हालाहाल भयो । दुबै बिद्यार्थी कक्षा ५ मा अध्ययनरत थिए । एक जना घाइते भए । उपचारको लागी अस्पताल लगियो । चिकित्सकले बिद्यार्थीको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको कुरा शुरु बाटै बताउदै आइरहेका थिए । बिद्यालयको हाता भित्रै र बिद्यालय समयमा घटना भएको थियो ।
संगै पढ्ने आशिष गुरुङले होम बहादुर बिकलाई ४ बजे पछि ट्युसन पढ्ने बेलामा ट्वाइलेट भित्र हाने । होमबहादुर घाइते भए र तत्काल गण्डकी अस्पताल लगियो । त्यहा उपचार सम्भव नभएपछि बिकलाई मणीपाल लगियो तर विद्यालय पढ्न गएका होम बहादुर ४ बजेपछि घर फर्कनुपर्नेमा कहिल्यै नफर्कने गरि विदा भए । पुरा कार्यक्रमको भिडियो हेर्नुहोस :